Jasa Website: September 2015
Cheap weebụsaịtị Development Services
Weebụsaịtị (English: na website) bụ a na ibe weebụ na-interconnected nke na-adịkarị emi odude ke odibo otu nwere collection nke ọmụma nyere site n'otu n'otu, dị iche iche, ma ọ bụ òtù.  A website a na-emekarị enịm ọbụlagodi na a sava weebụ na ike ịnwetanwu site a netwọk dị ka Internet, ma ọ bụ a Obodo ebe netwọk (LAN) site na Internet adreesị na-ghọtara dị ka URL. Jikọtara niile n'ihu ọha inweta saịtị na Internet nwekwara kwuru na dị ka World Wide Web, ma ọ bụ mma mara site na acronym WWW. Ọ bụ ezie na ọ dịkarịa ala n'ụlọ peeji nke Internet saịtị bụ n'ozuzu inweta ka ọha na eze kpamkpam, na omume ọ bụghị ihe niile na saịtị nye nnwere onwe maka ọha na eze iji nweta ya, ụfọdụ na weebụ saịtị achọ ọbịa aha ya dị ka òtù, ma ọ bụ ọbụna na-achọ ugwo na-aggota na-enwe ike ịnweta ọdịnaya ẹdude na na weebụ saịtị, dị ka saịtị na-egosi ndị gba ọtọ, ozi ọma weebụsaịtị, e-mail ọrụ (e-mail), na ndị ọzọ. Ndị a mgbochi n'ozuzu mere n'ihi ihe nke nche, nkwanye ùgwù maka nzuzo, ma ọ bụ maka ụfọdụ azụmahịa nzube.
A na ibe weebụ bụ otu faịlụ dere dị ka a larịị ederede faịlụ (larịị ederede) na-ndokwa na jikọtara dị otú ahụ n'ụzọ na ntụziaka dabeere HTML ma ọ bụ XHTML, mgbe ụfọdụ, na-etinyere na a bit nke scripting asụsụ. Faịlụ a na-ahụ sụgharịrị nchọgharị na weebụ na egosipụta ka a peeji na kọmputa ileba anya.
The web peeji nke na-enweta site na onye ọrụ site na netwọk nkwurịta okwu protocol akpọ HTTP, na mgbakwunye na rụọ nchekwa na nzuzo akụkụ ka mma, website nwekwara ike mejuputa a usoro maka ịnweta site na https protocol.
Echepụta weebụ bụ Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee, mgbe na weebụ saịtị jikọọ na netwọk mbụ pụta na 1991. The nzube nke otu mgbe emebe a website bụ ikwado mgbanwe na imelite ozi na a ibe na-eme nchọpụta ebe ọ na-arụ ọrụ. On April 30, 1993, CERN (ebe Tim-arụ ọrụ) mara ọkwa na WWW ike ga-eji maka free site na ọha na eze.
A website nwere ike ịbụ ọrụ nke otu onye ma ọ ndị mmadụ n'otu n'otu, ma ọ bụ show nwe nke otu nzukọ, ụlọ ọrụ. na-emekarị nneme na a na saịtị weebụ na-ezo aka a kpọmkwem isiokwu ma ọ bụ ole na ole, ma ọ bụ nke otu mmasị. A nrụọrụ weebụ nwere ike ịnwe njikọ na jikọọ ọzọ na weebụ saịtị, demkian nwekwara ndị ọzọ na saịtị weebụ. Nke a mgbe ụfọdụ na-eme ka ihe dị iche n'etiti a na saịtị weebụ kere site otu onye ma ọ mmadụ n'otu n'otu na web saịtị na e mere site azụmahịa òtù na-adịghị otú doro anya.
Na saịtị weebụ na-emekarị enịm na a sava weebụ. A sava weebụ na-adịkarị onwem na a ngwaọrụ-kpọmkwem software aka na ngalaba aha ntọala, nakwa dị ka onye na-ejizi ọrụ n'elu http protocol akpọ http Server (English: http Server) dị ka Apache http Server ma ọ bụ Internet Ozi Ọrụ (IIS).
Na-enwe ike-ekwurịta okwu na niile kọmputa jikọọ na Ịntanetị, na-eji a nkwurịta okwu protocol na-eji TCP / IP (Nzipu Control Protocol / Internet Protocol). Bụla kọmputa jikọọ na Ịntanetị nwere adreesị, dị ka 192.168.14.96. Iji nweta ozi ma ọ bụ data na Internet, anyị nwere ike ịnweta ya site na iji kọmputa ede a adreesị weebụ na adreesị mmanya. Adreesị nke a na saịtị ahụ na Internet akpọ ngalaba aha. Ya mere, ndị na-adịgide adịgide adreesị nke ngalaba aha hụrụ na Internet na saịtị ọ eji ya iji chọpụta otu saịtị. Na ndị ọzọ okwu, ngalaba Aha bụ adreesị-eji chọta a na saịtị ahụ na Internet.
Mmekọrita na nkwurịta okwu protocol TCP / IP, ngalaba aha pụrụ iji tụnyere a ekwentị akwụkwọ a, anyị na-eji ọtụtụ na-akpọ mmadụ. n'ihi na ihe atụ mgbe anyị mengekses saịtị www.wikipedia.com nchọgharị na weebụ Internet Explorer ga-akpọtụrụ ihe atụ IP 202.68.0.134.
General okwu na ngalaba aha bụ URL (edo akụ locator), nke bụ ụzọ chọpụta ihe na-adreesị na ga-eji nweta Ịntanetị. The URL adreesị bụ a pụrụ iche adreesị maka otu faịlụ na nwere ike inweta site Internet. URL adreesị ekpuchi niile ụdị faịlụ ndị ọzọ na ike ga-enweta site na Internet, ihe atụ, HTML faịlụ, zip, rar, jpg, gif, na PNG.
Zuru ezu URL adreesị bụ ka ndị a: protocol: // kpọrọ aha / ụzọ / filename
The protocol na-egosi na ụdị protocol na-eji, ie http, ftp, na na.
The kpọrọ aha bụ kpọrọ aha (ngalaba) na-akpọ.
Ụzọ bụ ebe ma ọ bụ na ndekọ na ebe faịlụ na-etinye na a sava weebụ.
faịlụ aha bụ faịlụ aha a na-akpọ.
N'elu URL na iji http protocol
Ngalaba aha bụ www.wikipedia.co.id
Ụzọ ma ọ bụ ndekọ na-aduak isiokwu
Enweta faịlụ aha bụ ensiklopedia.htm
Agụnye-ekwu okwu, na weebụ saịtị nwere ike nkewa n'ime 3 akụkụ:
Static weebụ bụ a na saịtị weebụ nke nwere ọdịnaya na-adịghị aduak-emelitere oge nke mere na ntọala ma ọ bụ melite ọdịnaya nke ibe weebụ a mere aka. E nwere atọ ụdị nke ịba uru ngwaọrụ ejikarị na mwube nke a static weebụ:
Text nchịkọta akụkọ bụ ịba uru eji dezie ibe weebụ, ka ihe atụ: Notepad ma ọ bụ TextEdit.
WYSIWYG nchịkọta akụkọ bụ a software ịba uru ibe weebụ nchịkọta akụkọ na-abịa na a onyeōzi interface ke imewe na pendisainannya weebụ, ibe weebụ faịlụ lengsung n'ozuzu bụghị dezie site ọrụ, ma a na ịba uru ga-mere na-akpaghị aka dabeere na ọrụ peeji nke kere site ọrụ. Nke a software atụ: Microsoft FrontPage, Macromedia Karaca.
Editor-dabeere ndebiri ụfọdụ ịba uru dị ka Rapidweaver na iWeb, ọrụ nwere ike mfe ike a website na-enweghị mara HTML asụsụ, ma edezi ibe weebụ dị nnọọ ka a nkịtị peeji, onye ọrụ nwere ike họrọ a template nke ga na-eji a na ịba uru dezie faịlụ kere ọrụ na-eme ka ibe weebụ na-akpaghị aka.
Dynamic weebụ bụ a na saịtị weebụ na-kpọmkwem haziri nke mere na ọdịnaya ẹdude ke saịtị ahụ nwere ike-emelitere na a mgbe niile na ala. Dị ka aha-apụta, na ọdịnaya ẹdude n'ime a website n'ozuzu ga-agbanwe mgbe-agafe a ụfọdụ oge. News na saịtị ndị otu ihe atụ nke ụdị nke saịtị na n'ozuzu implements ike website.
N'adịghị ka static weebụsaịtị, ike weebụsaịtị mmejuputa iwu n'ozuzu na-achọ ịdị adị nke akụrụngwa bụ ihe mgbagwoju karịa a static na saịtị weebụ. Nke a bụ n'ihi na ike website ibe weebụ n'ozuzu naanị-mere mgbe e nwere ndị ọrụ nweta ya, dị ka megide a static nrụọrụ weebụ nke n'ozuzu kpụrụ a ọnụ ọgụgụ nke ugbu a ibe weebụ uploaded a sava weebụ nke mere na mgbe ọrụ ịnweta sava weebụ nnọọ inye na peeji na-enweghị mkpa mere mbụ.
Aka sava weebụ na-emepụta na ibe weebụ mgbe ọrụ ịnweta ha, n'ozuzu on a sava weebụ onwem na igwe asụsụ translation scripts (PHP, asp, ColdFusion, ma ọ bụ ndị ọzọ), nakwa dị ka software relational nchekwa data management usoro dị ka MySQL.
A faịlụ Ọdịdị bụ n'ozuzu dị iche iche ike website na static na weebụ saịtị, faịlụ na a static weebụ bụ n'ozuzu a set nke faịlụ na-eme ka elu a na saịtị weebụ. N'adịghị ka ndị ikpe na ike na weebụ saịtị, faịlụ n'ime ike weebụ bụ n'ozuzu a set nke faịlụ na-eme ka ngwa weebụ software ga-egbu site a igwe translation nke sava weebụ, ijikwa ọrụ nke na-eme ka ibe weebụ mgbe na peeji nke rịọrọ site onye ọrụ. ==
Ngalaba bụ adreesị nke a website bụ, n'ezie adreesị nke saịtị na adị na Internet bụ isi ụdị nke nọmba, n'ihi na ihe atụ 17.125.135.147 ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ a mesịa na adreesị mmanya ke weebụ penejelajah ọ ga-emeghe Google saịtị weebụ, ihe atụ ọzọ 72,30 .38.140 na-mesịa ọ ga-emeghe Yahoo. Ojiji nke nọmba ndị a na-akpọkarị otu adreesị IP mgbe ọ bụ n'ezie na ngalaba adreesị.
Ngalaba-eji okwu aims eji ihe kwesịrị ncheta karịa inwe buo iji nke nọmba ogologo. Ya mere, ndị ọkachamara ka Internet ngalaba akpọ usoro ke otu ụdị nke okwu kama iji Aịzik ka nke nọmba.
The akụkụ nke ngalaba.
ndọtị (ndọtị) na-eji
Ihe atụ: wikipedia.org ngalaba aha a na-eji google na ndọtị na-website. Na mbụ, ọ bụghị nke ukwuu ngalaba extensions, ngalaba extensions ugbu a nwere nnọọ ọtụtụ n'ime ha (.com, .edu, .co.uk, .gov, website, wdg). Arịọrọ ndọtị na a ngalaba ekwesịghị ịbụ aka ike karịsịa maka .edu, .gov, .go.id na dị iche iche extensions bụ nanị maka izi oru na ọchịchị naanị ya.
Subdomain ma ọ bụrụ na ntụnyere dị ka akwụkwọ, e nwere isi n'akwụkwọ ma e nwekwara a ngalaba na bụ akụkụ nke sebuh isi. N'otu aka ahụ na ngalaba, subdomain bụ akụkụ nke a ngalaba page. Ihe Nlereanya http://id.wikipedia.org/ wikipedia.org bụ a na ngalaba na id bụ a subdomain nke ngalaba wikipedia.org.
Top larịị ngalaba aha bụ a ahiri n'azụ kwuru ngalaba aha dị ka website (dotcommercial), .NET (dotnetwork), website (dotorganization), .edu (doteducation), .gov (dotgoverment), na .mil (dotmilitary).
E nwere ihe abụọ dị iche iche nke Top larịị ngalaba, na Global Top larịị ngalaba (gTLD) na Country Usoro Top larịị ngalaba (ccTLD). gTLD na-dị ka a kọwara n'elu na ccTLD bụ a TLD na a kara nke onye mba, dị ka Indonesia na ID koodu (co.id, net.id, or.id) ma ọ bụ Singapore na a koodu nke SG (com.sg, net.sg, wdg).
Ditranslate si: https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
Diposting oleh Paket Wisata di 10.26 Tidak ada komentar: